မြေ - north dagon land for sale Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
မြေ classified: North Dagon land for Sale
#မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်_လုံးချင်း_မြေကွက်_အရောင်း (35) ရပ်ကွက် သီးသန့် နေရာကောင်း လုံးချင်း မြေကွက်များ အမြန်ရောင်းမည်**** 1. ပင်လုံလမ်းမအနီး မှတ်တိုင် အနီး ( 40 × 60 ) 1 RC , M1 , S2 ,ကျွန်းပါကေးခင်း , ဂရန်မြေ စျေးနှုန်း - 1600 သိန်း ( ညှိနှိုင်း ) 2. ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းမ အနီး ကားမှတ်တိုင် အနီး ( 40 × 60 ) 1RC , M1, S2 , ဂရန်မြေ စျေးနှုန်း - 2100 သိန်း ( ညှိနှိုင်း ) 3. ပင်လုံလမ်းမကြီး ကျောကပ် ( 40 × 60 ) ရေ/မီး ပါ , ဂရန်မြေ စျေးနှုန်း - 1700 သိန်း ( ညှိနိုင်း ) ====================== အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ======================= -3နာရီခန့် ကြိုချိန်းပေးပါခင်ဗျာ ======================= ဒါလေးတော့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ အနီးအနားရောက်နေလို့ လမ်းကြုံကြည့်ချင်တာမျိုး အဆင်မပြေပါ... ဖုန်းကြိုဆက်ပီးချိန်းပေးပါ..လိုက်လံပြသပေးပါမည် ======================= STA Real Estate & Services 09 8972 5550 8 (Viber) 09 7989 1807 8 (Viber) 0979 2546 239 0979 2546 429 0979 5141 631 Message @ Chat Box [email protected] ========================= -မြို့နယ်စုံ ရပ်ကွက်စုံ မှအိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်း ကွန်ဒို စက်ရုံ ဂိုဒေါင် ရောင်း/၀ယ်/ငှားရမ်းလိုပါက ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ -လူကြီးမင်းတို့၏ တန်ဖိုးရှိသော အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်း ကွန်ဒို စက်ရုံ ဂိုဒေါင် များ ရောင်း/ငှါးရမ်းလိုပါက ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။